Fianarana AutoCAD 2013 maimaim-poana - Geofumadas
May, 2011 AutoCAD-Autodesk, Fampianarana CAD / GIS
Iza no tsy mila course AutoCAD maimaim-poana amin'ny Internet ...
Raha fintinina, tsy misy na inona na inona toy ny fanarahana fandaharam-pianarana mahazatra miaraka amin'ny mpampianatra mahay hianatra AutoCAD. Saingy ny safidy hasehoko anao dia nahagaga ahy ahy, raha jerena fa tonga tsy ela akory ny AutoCAD 2012. Ity ny làlana AutoCAD 2012 natolotry ny mpanoratra ny Guides Inmediatas.com, izay nanana finiavana hanitsy ny làlana nisy ary mbola mijanona ho an'ny AutoCAD 2008 fa ankehitriny eo ambanin'ny interface sy farany What's New in AutoCAD 2012.
Ny tombony lehibe indrindra amin'ity taranja ity dia amin'ny horonan-tsary miaraka amina feo manazava tsikelikely, miaraka amin'ny fanampiana fanampiny aorian'ny famokarana izay manome azy ireo tsiro sy fahasoavana manokana. Ny fianarana manao an'io fomba io dia tena azo ampiharina, indrindra ho an'ireo mpampiasa izay efa mahalala AutoCAD, saingy somary very miaraka amin'ireo fiasa vaovao amin'ny interface interface, indrindra satria io ilay mpampiasa izay tsy mandray taranja fa mianatra amin'ny fomba ampianarin-tena. Hitako tsara ihany koa ny Mazava ho azy ho an'ireo mpampiasa vaovao, satria ny fahazarana dia miompana amin'ny asa azo ampiharina; na dia mety atao amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny farany aza izany izay mampivelatra asa iray manontolo, toy ny urbanisation na ny drafitra trano, izay manondro ny baiko tsirairay amin'ny toko misy azy ireo.
Jereo ny fomba azo ampiharina amin'ny sehatra Ribbon, rehefa misy olona manazava azy io amin'ny fanantenana bebe kokoa noho ny fahatairantsika roa taona lasa izay.
Tokony ho ekena fa tsy ny olona rehetra no manana finiavana hanary fitaovana toa izao; Ny Internet dia namela fahalalana be dia be hatao demokratika isan'andro isan'andro ary noho izany dia vitsy kokoa ny fialantsiny hianarana ilay programa. Manolotra ny fisaorana an'i Luis Manuel González Nava, mpanoratra an'ity vokatra ity izahay. Ity misy ohatra iray, ary eto ambany ny famintinana ireo lohahevitra efa misy, horonantsary maherin'ny 400 izay efa vonona hividy ihany koa, ao anatin'izany ny fonosana Blocks ho an'ny AutoCAD sy loharano fanampiny fanampiny.
Fizarana voalohany: Fomba fototra amin'ny AutoCAD
Toko 1: Inona ny AutoCAD?
Toko 2: Ny interface interface an'ny AutoCAD 2012
Toko 3: Vondrona sy koordinates
Toko 4: Fomba fisehoana fototra
Toko 5: Geometry of Basic Objects
Toko 6: Objet composés
Toko 7: Object Properties
8 Toko: Text
Toko 9: References Object
Toko 10: Fitadiavana ny fanondroana ny Object
Toko 11: Polar Tracking
Toko 12: Fandrosoana farafaharatsiny
Toko 13: Fikarohana 2D
Toko 14: View Management
Toko 15: Rafitra fanaraha-maso manokana
Ny fizarana fahefatra, fanorenana tsotra ny zavatra
Toko 16: Fomba fisafidianana
Toko 17: Simple Edition
Toko 18: Advanced Editing
Toko 19: Clamps
Toko 20: Shading, Gradients, ary Contours
Toko 21: The Palette Properties
Ny fizarana fahadimy, Organisation of drawings
Toko 22: Fonosana
Toko 23: Blocks
Toko 24: References External
Toko 25: Resource in Drawings
Toko 26: Fanontaniana
Ny fizarana fahenina, Sizing
Toko 27 Dimensioning
Toro-làlana 28 CAD
Ny fizarana fahafito, fametrahana sy famoahana
Toko 30 Fandrindrana fanontana
Toko 31 Autocad sy Internet
Toko 32 Fikatrohana fikasana
Ny fizarana fahavalo, sary telo isaky ny sary
Toko 33 The Modeling Space 3D
34 SCP ao amin'ny 3D
Toko 35 Jereo ao amin'ny 3D
Toko 36 Objects 3D
Toko 37 Solid
Toko 38 Surfaces
Toko 39 Mesh
Toko 40 modely
Ny fianarana dia nalaina an-tserasera, maimaim-poana.
Atombohy eto ny fampianarana an-tserasera AutoCAD 2012
Ankoatr'izay ihany koa Afaka mividy US $ 34.99 ianao mba hahita izany tsy misy fifandraisana aterineto
Fomba feno amin'ny AutoCAD 2D sy 3D miaraka Horonan-tsary 477
Fitaovana tsotra ho an'ny sehatra fitadiavana
rehetra tahiryMazava ho azy
Sary 17,000 dwg de blocs sy modely 3D
Pejy 255 nomerika miaraka amin'ny toko 40
Anisan'izany ny fandefasana entana any an-tranonao, any amin'ny firenena any Amerika sy Eoropa.
Azo vidiana amin'ny PayPal, Card Card ary Bank Transfer.
Taorian'ilay tapakila fihenam-bidy nomen'ny Z! Koupona, ny karama dia mandoa ny fampiasana ny FastSpring, mba hanome toky fa azo omena amin'ny alalan'ny fomba amam-panao samihafa izay nangatahin'ny olona ary mitovy amin'ny vola eo an-toerana.
Ny fomba voalohany dia amin'ny alalan'ny fampiasana karatra orina na bola.
Ny faharoa dia amin'ny alàlan'ny kaonty PayPal
Ny fahatelo dia amin'ny alalan'ny fifindran'ny banky ACH, ho an'ireo izay manana sampana an-tserasera. Tsy azo ampiharina any amin'ny firenena rehetra.
Ny farany dia amin'ny fifindrana iraisam-pirenena. Noho izany dia tsy maintsy misafidy ny «Purchase Order» ianao, mba handraisana ny kaontin-kafatra amin'ny banky mpanao gazety miaraka amin'ny banky nofidinao amin'ny tanànanao.
Raha manana coupon aloha ianao, na asaina amin'ny pejy aoFacebook mpankafy, afaka miditra ianao.
Ny sambo dia amin'ny alàlan'ny taratasy alefa, izay manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny herinandro 5, miankina amin'ny halavirana; Ny fandefasana dia miala an'i Mexico, ny antony mahatonga ny ao anatin'ity firenena ity ho afaka herinandro maromaro. Manome anao fitsipika iray hijerena azy anaty aterineto.
Ny fandefasana entana dia natao roa andro aorian'ny nandraisana ny karama, ary vita avy amin'ny Guide Guides avy any Meksika izany.
Na dia tonga ao an-tranonao aza izy dia afaka manontany amin'ny Internet ianao.
Raha te hahafantatra momba ny fivoriana manokana ianao dia manaraha anay Facebook o Twitter
Previous Post«Previous Ampidiro ny sary sy modelin'i 3D avy amin'ny Google Earth
Next Post Geofumadas | Mpitsidika: | Tanàna 100 amin'ny firenena 10manaraka »
156 Mamaly ny "Mazava ho azy fa AutoCAD 2013 maimaimpoana tsara"
Davron hoy izy:
Janoary, 2019 at
mpandresy manuel gutierrez sanchez hoy izy:
Mianatra ny taona voalohany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa aho ary tiako ny mianatra autocad.
jose zambrano hoy izy:
Nampahafantariko azy ireo fa vao haingana aho no nisotro ronono toy ny injeniera, mipetraka ao Guayaquil, Ekoatera, ary te-haka BASIC AUTOCAP
Veloma sy misaotra betsaka noho ny valin-teninao
Jereo eto hoy izy:
Eny, te-handao fotsiny ny fanehoan-kevitra fohy momba anao aho
tranonkala mba ahitanao raha misy olona mamaky.
Farafaharatsiny izany no hitako. Manantena aho fa mbola manoratra foana ianao
Efa nahavita izany ianao ary raha misy zavatra azontsika ifandraisana amin'ny ho avy dia manamafy ahy.
Luis Julios hoy izy:
Misaotra anao noho ny fandraisana anjara amin'ny dingana iray tahaka ny autocad, izay hamela ahy hivoatra manokana
Gonzalo hoy izy:
Tiako ny maka ny làlam-pifamoivoizana satria izy dia tena manan-danja tokoa hampivelatra ny asako
Luis Alberto Riaño hoy izy:
Te-haka ny fomba fitetezam-paritra virtuel misaotra anao aho satria afaka manampy ahy ianao ary rehefa manomboka misaotra ny kilasy
Nelson hoy izy:
Hello. Tiako ny mianatra ny Autocad miaraka amin'ny lalany. Noho ny tsy fahafantarako ny fampiasana izany dia manakana ahy tsy hampihatra amin'ny toerana tsara kokoa amin'ny asako. Maniry aho fa afaka milaza aminao ny fomba hahazoana izany. Misaotra anao
Miarahaba antsika amin'ny fandraisana ny fiantsoana autocad raha tena malalaka tokoa izany, Salama
jorge espinosa ramirez hoy izy:
Tiako be ny handray ity dingana ity te hianatra momba ny siansa sivily ary fantatro fa fitaovana fototra izany
JAVIER GONZALEZ RIOS hoy izy:
NY FAHARETANA OF AUTOCAD-2012 MAHAIZA IZAY VEHIVAVY.
felipe molina martinez hoy izy:
Hafiriana no miandry?
Tsy mahafantatra na inona na inona momba ny autocad aho ary mangataka fa ny sampan'ny engineering dia afaka mandefa ahy ny voambolana maimaimpoana ho an'ny mpandray anjara azafady.
luis brave hoy izy:
Tiako ny hianatra ny fiantsoana autocad avy amin'ny scratch
Carlos Caraballo hoy izy:
Mey, 2013 ao
Manana ny autocad 2011 aho, manana izany fandaharam-pianarana izany ianao.
Ao Kolombia aho, inona ny lanjan'ny fianarana.
Afaka mandefa ny e-mailo aho mba hifandraisana.
Enrique hoy izy:
Tiako ny mandray ny lalana malalaka ahafahana mianatra azy avy amin'ny 0 misaotra !!
Angel hoy izy:
Nahoana no lazaina hoe maimaimpoana izany ???
Hi, avy any Panama aho ary te hividy ny lalana
Ricardo Chavez hoy izy:
Janoary, 2013 at
Tiako ny handray ny lalana maimaim-poana avy amin'ny seha-piainana tsy misy dikany (mpilatsaka an-tsitrapo)
jose ramon rodriguea hdez. hoy izy:
Mipetraka ao an-tanànan'i Zitacuaro Michoacan aho, hafiriana no ilana azy. ary ao amin'izany banky izany dia azo atao ny fandoavam-bola. jerena
Alejandro Fernandez Villalobos hoy izy:
Heveriko fa mahatalanjona fa ny demokrasia dia tena demokrasia ary misy mpianatra sy olona maro manana faniriana hianatra.
Alefaso aminay ny hafatra, ary hanatrika anay ianao satria angamba tsy any amin'ny firenenao ianao ary sarotra ny fiantsoana.
FELIX ALFREDO HERNANDEZ RIVERA hoy izy:
AZO AMPIASAINA NY ZAVA-DIMY HIFAMPAHEREZANA AO AMIN'NY BAIBOLY?
MISY INTSONY ANY AMIN'IZAY!
Ny Perü dia mandray ny 3 herinandro sy tapany.
Raha mividy ny version 2013 ianao dia mandoa anao 29.99 sy ny androany ihany.
Hitler hoy izy:
Te-hividy ny làlana izay aho avy any Peroa ao Iquitos ny fotoana tokony hahatongavana
ARQ. Mpanjaka hoy izy:
Hiara-kevitra tsara aho, avy any Nicaragua aho ary tiako ny handehanako.
Te-hanome fanomezana aho
http://www.cursolatinonica.vacau.com Ao amin'ity pejy ity dia misy ny fiantsoana feno autocad, archicad, sns. ho an'ny mpanjifany sy ny haavony. tsidiho io tianao io
faharoa hoy izy:
Misaotra anao nanome ity dingana ity, ary raha hanao ny ankamaroan'izany aho,
Izy ireo dia zanaky ny pinche chinada afaka mamaky azy maimaim-poana
Telo herinandro ho an'i Colombia
Hafiriana no handehanana any Kolombia? Misaotra anao.
Mazava ho azy fa tsy tafiditra amin'izany, ny vidin'ny AutoCAD amin'ny dikany LT mihoatra ny 1,000 dolara. Tsy antenaina ho tafiditra ao amin'ny lise izay manefa ny 34.99
Na izany aza, ho an'ny tanjona fianarana, azonao atao ny maka ny dikan-drakitra feno
Miasa toy ny ordinatera araka ny tokony ho izy izy io, manana mari-pamantarana famantarana fotsiny izy amin'ny fotoana hanaovana pirinty milaza fa fanovozam-panabeazana izany.
Hitako fa mahaliana izany saingy manana ahiahy aho fa ny programa autocad dia tafiditra na tsy maintsy mividy izany
Nividy olona maromaro avy any Espana ny fianarana, ny fotoana nahatongavana dia eo amin'ny herinandro 4, satria mandao an'i Meksika.
Hatramin'izao dia tsy mbola very na dia iray aza ny lalana ary tsy nisy fitarainana.
gustavo hugo mendizabal vargas hoy izy:
Mahaliana ahy ny mividy ny lalana fa ny azo antoka kosa dia ny sambo raha vantany vao vita ny fividianana ahy any Espaina dia tiako ny hahafantarana ny fotoana tokony hodiako ho any an-tranoko
Ny dingana dia natao hanomboka amin'ny scratch, noho izany dia aza matahotra izany.
NAYLEXI hoy izy:
Ahoana ny momba! Tena liana amin'ny fianarana aho, fa amin'ny zaza efa voalaza etsy ambony dia te hahafantatra aho hoe ohatrinona no afaka manompo ahy amin'ny maha-mpandimby azy?
elver tineo strap hoy izy:
Ireo fampianarana ireo dia tena tadiavinao, azafady fa azonao atao ny mandefa ny kaonty fandoavam-bola
Hugo Davila hoy izy:
Salama ny fianarana dia ahitana toro-hevitra na mpampianatra ho an'ireo tranga sarotra indrindra ?, izay samy manoro azy ireo ho an'ny olona 100% beginner.
Eny, araka ny filazan'ny lahatsoratra, ny saram-pandefasana mailaka dia tafiditra.
Mandoa karatra fiara na banky ianao.
Manuel hoy izy:
Tiako hividy crurso ho toy ny fandoavam-bola ho an'ny tolokevitra 35 momba ny fianarana, izany rehetra izany
raul alejandro lombana hoy izy:
Mila antsipirihany bebe kokoa momba ny fiantsoana, vidin'ny fandefasana ny autocad aho, mahaliana
Julio Cesar Romero Gallardo hoy izy:
Hitako fa tena zava-dehibe ny asa rehetra atolotra eto satria tena ilaina
Efa nandefasako mailaka miaraka amin'ny fampahalalana aho
Hi Ignacio, nandefa ny vaovao tamin'ny mailakao aho.
ignacio acosta grajeda hoy izy:
Mila fampahalalana bebe kokoa aho satria tena tiako ny handray ny firarian-tsoa sy ny fisaorana
Ruben hoy izy:
Miarahaba anareo aho amin'ity dingana ity ary mila anareo aho handefa ny vaovao. ho an'ny mailaka azafady mba mila mahafantatra aho fa mendri-piderana marina.
Ny fampianarana dia alefa amin'ny paositra. Mitentina dolara 34.99 io.
Misaotra betsaka anareo Azonao atao ihany koa ny mandefa ahy maimaim-poana amin'ny mailaka?
Matetika eo anelanelan'ny herinandro 3 sy 4 izany. Tokony ho tonga amin'ity herinandro ity aho.
Alexandra hoy izy:
Salama aho nividy ny lalana 2 herinandro lasa izay ary tsy mbola tonga any Etazonia aho ary te hahafantatra ny daty hahatongavan'izany.
melissa ady hoy izy:
Tiako ny kiero hianatra
Te hianatra ny autocad 2012 maimaimpoana aho azafady manantena aho fa handefa ahy ny torolàlana amin'ny mailaka mailaka aho.
Nelson Hernandez hoy izy:
Hello, mahaliana ahy ny mianatra ny lalana AUTOCAD 2012 maimaim-poana, azafady mba alefaso amin'ny mailaka izay tsy maintsy ataoko hanaovana izany.
Mipetraka any Cali Kolombia aho, misaotra anao.
Raha any Mexico City ianao, dia tonga herinandro latsaka kely ny entana.
Raha toa ianao ka haka izany, dia manakarama vola 5 ianao, izany hoe, handoa ny sandan'ny vola US $ 29.99 ianao.
Tsy maintsy mandefa mailaka ianao editor@geofumadas.com hanome anao ny code discounted sy ny adiresy tokony aloanao.
Liliana hoy izy:
Miarahaba, mbola manelingelina azy ireo indray aho, tsy mahazo ny paositra tsy fantatro raha navelako tsy nandefa mailaka ry zareo lilivar2@hotmail.com. ary tiako ho fantatra ao amin'ny CD eto Mexico raha toa ka azo atao ny mizara mivantana amin'ny adiresy.
Lady hoy izy:
Miarahaba, te-hanao ny fiantsoana autocad maimaim-poana aho, alefaso azafady ny fampahalalana nataoko mba hanaovana izany.
Ny fianarana ny adiresy ara-batana dia mety tsy ho herinandro iray, satria mandao an'i Meksika.
Ny fampahalalana momba ny fianarana dia ao amin'ny lahatsoratra, tsy misy zavatra hafa tokony hanazava amin'ny alalan'ny paositra.
jose gonzalez hoy izy:
Salama, tsara ny tolakandro, tsy liana amin'ny fahazoan-dàlana autocad aho. Azonao atao ny mandefa ny fampahalalana amin'ny mailaka.Mipetraka any Saltillo, Coahuila, Mexico aho.
Eny, amin'ny endriny mekanika, dia betsaka ny fampiharana ny AutoCAD.
Ny vidin'io dia manana vidiny mitovy, tsy taiza na aiza na aiza aleha. US $ 34.99 dia afaka mandoa vola amin'ny banky eo an-toerana ianao amin'ny alàlan'ny famindrana banky.
Javier April hoy izy:
Mpanamboatra indostrialy aho ary maro no mila mianatra manamboatra fiara. Tiako ho fantatra raha manana fahafahana tsara hampihatra izany amin'ny mekanika aho. ary raha azonao atao ny mandefa ahy ny fampahalalana momba ny fandikan-teny amin'ny teny espaniola sy ny vidin'izany. Izaho dia avy any ivelany ao Ekoatera. Misaotra betsaka anao miandry ny valinteninao
Ny vidiny dia $ 34.95.
Tao anatin'ny fampakaram-bady nandritra ny fotoana fohy, saingy amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola PayPal, anisan'izany ny fandefasana.
luvi hoy izy:
Fa ny vidiny dia $ 25 = 68.00 soles. ary amin'io safidy io dia milaza ny solona 98.00 .. ???
Azonao atao ihany koa ny mandefa banky.
Ao amin'ny rohy "Buy now"
Ampiasao ny safidy "Fividianana" ary rehefa ampidirinao ny angon-drakitrao dia alefa aminao amin'ny alàlan'ny famindrana ny banky ny antsipirian'ny banky.
Ny Paya dia natao fotsiny amin'ny Pay-Pal?. Tsy fantatro ny fomba handoavam-bola amin'izany fomba izany .. = (
Te hividy ny lalana aho. kaonty nomerao ao amin'ny banky tsirairay ..
Ny sambo dia mankany Però.
Safidio ny safidy Order Order. Aorian'ny fampidiranao ny fampahalalana anao dia halefa aminao ny mailaka ny angon-drakitra ao amin'ny banky. Miaraka amin'izany dia handeha any amin'ny banky ianao ary afaka manao ny famindrana. Ny vidiny dia ahitana fandefasana ny adiresinao amin'ny alàlan'ny mailaka.
ALEJANDRO MORENO HUAMAN hoy izy:
Mipetraka ao Ancash faritra ao Però aho te-hividy ny lalao tahaka ahy
Efa nandefasanay ny angona ny mailaka.
Mitaky dolara 34.99 amerikanina ny lise. Tafiditra ao ny sandan'ny fandefasana.
Tsy tafiditra ao anatin'izany ny boky natonta iray, fa ny DVD dia ahitana ny horonan-tsary, boky manazava manazava.
TITO MEDINA hoy izy:
MISY INTSONY ANY AMIN'IZAO TONTOLO IZAO IN VENEZUELA NESCESARIO IREO FITSIPIKA MOMBA NY MIRALENTA SY NY FIVAVAHANA (BOKY ET DVD)
Tena liana amin'ny fividianana ny lalana aho; Afaka mandefa ahy ny vaovao ilaina aho hametraka ny baiko, soratako avy amin'i Morelia, Mich
Tsara izany Araka ny hitanao, ao Meksika ny fotoana dia tonga ao anatin'ny latsaky ny 8 andro.
Macario Calvario Molina hoy izy:
Mazava ho azy, mamporisika azy aho raha toa ka misaotra azy tsara
Julio Alberto Traficante Gutierez hoy izy:
Hello, te-hianatra AutoCAD aho, miaina any Venezoelà sy 100 Kms. Avy amin'ny toerana misy ahy no andoavako ny fianarana, tiako ny mahafantatra izay tsara ho ahy, raha hividy ny fianarana aho na mandeha isan-kerinandro.
Tsy mivarotra ny programa AutoCAD isika, fa afaka mandefa azy io http://students.autodesk.com
Ny amidinay dia làlana hianarana ny fampiasana azy, ny vidiny dia 34.99 US dolara, anisan'izany ny fandefasana ny adiresinao. Tsy maintsy ataonao ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny PayPal na carte de crédit mifandray amin'ny PayPal.
Azonao atao ihany koa ny mandefa banky, amin'ny fanompoana FastSpring
roque alfonso castro arias hoy izy:
Tiako ho fantatra ny vidin'ny autocad 2012, ny endriky ny fandoavam-bola any Kolombià, izay handefa ny taratasy fandefasana sy ny fomba hianaranao ny fomba fampiasana izany mba hanatanterahana ny tetikasako manokana, izaho mpanao trano
Natao an-tserasera ny fianarana, amin'ny fotoananao ary manaraka ny lahatsary.
Tsy voahaja ny fanekena.
Raha manafatra ny DVD amin'ny alàlan'ny mailaka ianao dia alefa any aminao ihany koa ny fanazaran-tena, ny sakana ho an'ny AutoCAD sy ny horonan-tsary rehetra jerenao. Ny vidiny dia an'ohatra, raha heverinao fa ny sanda dia misy ny fandefasana any an-tranonao ... na aiza na aiza misy anao.
Tsy misy ny fanomezan-dàlana nomena azy.
Marcela hoy izy:
Salama tsara aho, avy any Arzantina aho, te-hahazo fampahalalana bebe kokoa momba ny fianarana, momba ny fandefasana sy ny karaman'ny mitovy, dia karazana taratasy maromaro vita amin'ny farany? Tiako ny manao izany, noho izany dia hiandry ny valinteninao aho.
Max hoy izy:
Ny veloma, .... Te hianatra ny fampianarana AutoCAD aho
Azony ampahafantarina ny tsipiriany misaotra anao.
Mercedes Giuffrida hoy izy:
Raiso ny fiarahabako. Sariitatra, mpikatroka Autocad aho ary tiako ny lalana momba ny autocad ao amin'ny 2012. Alefaso azafady rohy mankany amin'ny mailakao mba haka ny lalana maimaim-poana, Misaotra!
Avy any Santiago del Estero, Arzantina aho ary mila AutoCAD Civil 3D 2012 amin'ny teny Espaniola. Misaotra anao
Ing.Civil Alfredo N hoy izy:
Tiako ny hianatra bebe kokoa Auto CAD
Ahoana no ahazoako boky an-tserasera? hoy izy:
Te-hianatra auto cad aho
Sibila González hoy izy:
Ilaina ny mianatra autocad, satria mpahay maritrano aho ary te hanao ny drafiko manokana.
Mandoa ny vola 34.99 ianao ary mandefa azy any amin'ny adiresy omenareo rehefa manao ny fandoavam-bola.
Mazava ho azy fa alefa avy any Mexico izany. Ka alefanay any Canada io vidiny io ihany.
Edwin Ortiz hoy izy:
Tiako ny lalana ary te hividy azy aho boliviana, toy ny ataoko
Leonardo hoy izy:
Mipetraka eto Toronto aho ary te-hahafantatra aho raha afaka mandefa ahy izy ireo na efa manana ny Autocad 2013 satria izany no fandaharana nataoko!
VICTOR GLZ hoy izy:
IZAY MIANKIZY HITANTSIKA HITARIKA AMIN'NY FITIAVANA MIARAKA AMIN'IZANY TEO AMINTSIKA IZANY ****** / ******* ANY ANY NATALY OF SRITA OR MANDEZAHA NY ANARAN'ANDRIAMANITRA HO AN'NY OLONA REHETRA
Fomba tsotra fotsiny izany.
james perdomo hoy izy:
Tiako ho fantatra raha manana fahazoan-dàlana amin'ny famolavolana lisitry ny trano famandrihana antsoina hoe customlaut autocad ny 2012
Te aprendender aho banfield mpanazatra ny mandeha any an-tsekoly 18: 30 23 mba orario rahateo fa misaotra anareo aho.
leonardo herdenez hoy izy:
Tiany ny hanao ny fianarana sivilizasiona, mila mahafantatra ny vidiny sy ny toerana itoriany
Luis alfonso chacon contrera hoy izy:
Vola amin'ny $ 34.99, anisan'izany ny fandefasana.
Ny fomba fandoavam-bola dia PayPal na carte de crédit mifandray amin'ny PayPal ary koa amin'ny alalan'ny famindrana banky.
fabian posada hoy izy:
Tiako ny mizara ny autocad any Kolombia izay mendrika ny hita, ary ny fomba ataoko ny fifampiraharahana
jenry espinoza loyola hoy izy:
Liana aho hianatra ity programa programa autocad ity
Manaiky carte de crédit, PayPal ary bank transfer ihany koa izahay.
Ny vidiny dia ny dollar amerikana 34.99 na ny mitovy aminy amin'ny vola eo an-toerana.
Colmkenz hoy izy:
Raha vantany vao mahazo ny làlana eto eto Venezoela aho, mandoa azy any Bolivares? Ahoana no ahafahan'ny tetik'asa ara-barotra, amin'ny alalàn'ny banky?
Ankasitrahako ny fanampianao, arahaba …….
anjely cross hoy izy:
Mahaliana ahy amin'ny AutoCAD Mazava ho azy fa ny manokana dia manatona ny milina fanontam-pirinty rindrina mba ho tena contruirlas, indrindra mahafantatra ny fitaovana nesecito in AutoCAD hantsaka ka hanao matso ihany.
Misaotra betsaka anao noho ny fanampianao.
miguel lambia mena hoy izy:
Mpankafy ny haitao aho, te-hianatra ny autocad 2012 farany.
Eny, afaka mandefa any Italie amin'ity vidiny ity ianao.
Tsy maninona raha manana fa dikan-AutoCAD, ny didy dia toy izany koa, amin'ny maha samy hafa ny Mazava ho azy fa dia tsy ahitana maritrano tapaka izay mety ho an'ny dikan-.
Miguel Angel Cardozo hoy izy:
Mipetraka any Italia aho, afaka mandefa azy eto, manana ihany koa ny Autocad Architectura 2009 aho, inona no azoko atao?
PABLO ALARCÓN MARTÍNEZ hoy izy:
AIZA no hitako ny valin'ny fikarohana?
alemaina hoy izy:
Mila carte de autocad 2012 aho rehefa tonga ao an-tranonao
Rehefa mahazo fidirana ny rindram-bola dia azonao atao ny misafidy ny volan'ny fireneny ary ny mitovy amin'izany dia miseho.
luis eduardo plata huertas hoy izy:
Hi Manuel Tiako ho fantatra ny vidin'ny fampianarana izay misaotra ny vidin'ny pesos Kolombiana mialoha
Ao amin'ny lahatsoratra dia manazava ny vidin'ny fianarana rehefa mandefa mailaka amin'ny endriny ara-batana izy.
Miarahaba, te-hahalala ny saran'ny fianarana aho
Ny fehezan-dalàna nomenay anareo, miditra ao amin'ny faritra Post tracking ianao, ary hiteny aminao ny fepetra entin'ny sambo.
Ity ny rohy
Carlos Herraez hoy izy:
miarahaba no hanaovako lahateny aminareo ho farany 13 / 3 / 2012, dia nandidy AutoCAD 2012 Mazava ho azy, tiako ho fantatra ny fomba manara-maso ny filaminana an-tserasera amin'ny alalan'ny, tsy hiditra ny teny miafina azoko.
Misaotra betsaka, Carlos Herraez
Raha miaina any Meksika ianao dia afaka manao fametrahana ho Bancomer, mitovy ny pNXXUMX.
Raha vantany vao vita ny fametrahana dia nandefasanao kopia voatahiry na sary mamaky ny fametrahana ary alefaso any aminao.
Ny votoatin'ny fianarana dia ao anaty DVD iray
afternoon've tsara no mijery ny sasany capiulos AutoCAD amin'ny aterineto sy tiako be dia be, ary miarahaba hiso Mazava ho azy fa ho an'ireo izay te-hianatra sy vaovao farany anay ao izany fandaharana.
Mpinamana akaiky ato amin'ity fandaharana ity aho ary sahiran-tsaina aho fa mieritreritra ny hahazo izany.
Ary manana fanontaniana vitsivitsy ihany aho:
ny serivisy entana dia tonga hatramin'ny CD. juarez chihuahua ??
ary firy ny isan'ireo mitovy lenta amin'ny sandan'ny pesos Meksikana?
ary firy DVD no mitazona ny lalana?
Izany rehetra izany dia misaotra betsaka anareo noho ny fianarana sy ny fankasitrahana.
Eny, afaka mandoa vola amin'ny famindrana banky ianao.
Miangavy aho hahaliana ny 2012 AutoCad aho. Tiako ho fantatra raha azo omena amin'ny transféré ilay fianarana.
Claudio hoy izy:
Misaotra misaotra rahalahy an'arivony, nahazo izany taminareo aho.
Kaisara penagos hoy izy:
Te hahafantatra ny lisitry ny autocad fototra aho, mba hianarana sy hanatsarana ny asantsika.
Malalaka ny làlana AutoCAD, tokony ho hitanao izany eo amin'ny pejy mampitohy antsika. Mba hahazoana ny andiany vaovao AutoCAD 2012 maimaim-poana dia azonao atao ny misintona azy http://students.autodesk.com
Jose Amado Aguilera Quispe hoy izy:
Raha te-hiditra an-tsehatra aho dia mila mianatra ilay dikan-teny vaovao
Tena feno fankasitrahana izy ireo.
Ny lalana Free AutoCAD 2012 dia eto:
Afaka mahita azy ety anaty aterineto ianao, ny rohy tsirairay dia manana lahatsary miaraka amin'ny feo, avy amin'ny toko tsirairay.
Gio Din hoy izy:
Ahoana no ahafahako mahazo ny fianarana na lesona ho an'ny Autocad 2012 maimaim-poana? na dia ny fototra iray aza.
Toa tsy azonao atao ny mandefa ny fisaorana
Fiarahabana Manuel Medina Tiako ny mandeha amin'ny autocad 2011 saingy tsy hitako ny mailanao, eto aho dia mandefa ahy mba hahafahantsika mifampiresaka
Naviskork dia fandaharana ihany koa amin'ny AutoDesk, aza mibahana azy any amin'ny format hafa, satria io programa io dia mamaky ny rakitra dwg
juank hoy izy:
Tokony ho fantatro ny fomba ahitako ny rakitra autocad ao amin'ny programa navisworks .. ahoana ny fomba hanondranana azy mba hahafahan'ity programa ity mamaky azy… ??
junior vergara - peru hoy izy:
Misaotra an'io fandraisana anjara goavambe io ho an'i Mr. Nava, misy vitsy ny olona izay manome fahafaham-po amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fianarana maimaim-poana amin'ny fianarana maodely ho toy ny autocad.
Walter Rúa Cerón hoy izy:
Te hianatra lesona maimaim-poana ampianarin'i Us aho; mba hahay hitantana ny autocad 2D sy 3D, momba ny fanomanana ny drafitra (amin'ny ankapobeny); Miala sasatra aho avy eo. jereo eto ianao
Tsy ilaina ny misaotra an'i Manuel, fiarahabana ary mandroso amin'ny asanao.
marco antonio hoy izy:
inona no vaovao mahafinaritra amin'ny lalana malalaka, auto cad
Luis Manuel González Nava hoy izy:
Ry namana malala:
Manoratra aminareo aho fa ny lalana amin'ny Autocad 2012, avy amin'ny Screen mankany amin'ny zava-misy, dia vita. Androany aho dia nandefa ny 40 sy ny toko farany mankany amin'ny pejy. Amin'ity lafiny ity dia te hanao fanehoan-kevitra vitsivitsy aho:
- Ankafiziko manokana ny fanonona ny Mazava ho azy fa amin'ny tranokalanao. Ny fitsidihana azoko tamin'ny pejy avy amin'ny tranokalanao dia tena zava-dehibe tamiko.
- Fantatro fa azo hatsaraina amin'ny fomba maro ny taranja. Ao amin'ny kinova manaraka dia hanararaotra manampy ohatra aho ary handinika lohahevitra samihafa. Na izany na tsy izany, dia tamin'ny fomba toy izany no tena haingam-pandeha ny fanavaozana azy raha vantany vao misy ny kinova ho an'ny programa 2013 fa tsy toy izao, izay naharitra 10 volana nahavitana ahy, 3 mihoatra ny nomanina.
- Ao anatin'ny andro vitsivitsy dia ho vonona ny kinova kapila momba io taranja io ihany, ho an'ireo izay mahita fa sarotra ny mahita azy amin'ny Internet ary mangataka ny misintona azy. Hanana fanampiny fanampiny kely izy io ary ho lafo be ny vidiny, miampy ny Mazava ho azy fa mbola hisy hatrany.
- Ary afaka andro vitsivitsy dia ho hita ao aminy izay, farafaharatsiny ho ahy, ilay tranonkala laharana 1 ho an'ny fampianarana solosaina maimaim-poana amin'ny Internet: http://www.aulaclic.es
Manararaotra ity fotoana ity aho haniry anao ny tsara indrindra amin'ny andro fialantsasatra ho avy.
alemana vargas hoy izy:
Ahoana no ahafahako manana lalana autocad maimaim-poana
sandra rodriguez pine hoy izy:
mahaliana ny fiantsenan'ny autocad 2012
b, b, b, m, m, m, b,
Ny endriny manontolo amin'ny AutoCAD 2012 dia ao amin'ny rohy marihina any amin'ny faran'ny lahatsoratra
Tsy misy vidiny ny mijery azy ety anaty aterineto.
MILTON OVIEDO hoy izy:
Tiako izany, mahaliana ahy ny mandray ny lalana izay tiako ho maimaimpoana. tsara
Tokony jerena amin'ny Internet ireo horonantsary. Tsy azo ampidinina izy ireo.
LENIN CACERES hoy izy:
Ahoana no ahafahako midina ireo vondrona misaotra mialoha ny alehako
fandraisana anjara tena tsara …… !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ny fahafahana miditra amin'ireo horonantsary dia maimaimpoana, araho amin'ny rohy mankany amin'ny Guide Guides.
antonio virhuez hoy izy:
Mila mahafantatra ny fomba fisoratana anarana aho, ary ny habetsaky ny fianarana dia mendrika, ary ny fotoan'ny fianarana, misaotra.
Raha te-handray ny AutoCAD dia mandehana mankany amin'ny rohy
Misy ny rohy amin'ny lahatsary tsirairay.
Tsara ny fandraisana anjara .. Avy any Paragoay sy ny fiarahabana aho
valeska channel hoy izy:
Hi, te-hanao io lalana io aho ary te-hahazo fanazavana bebe kokoa. Misaotra.
King william hoy izy:
salama, azafady mba ampio aho, mila ny lalana maimaim-poana, grasias
bandy zafikelin'i german hoy izy:
fandaharana tsara, fa eo ambanin'ny kilasy
fandaharana tsara amin'ny fianarana
Raha mangataka ny làlana ianao, afaka maimaim-poana izany raha mbola mijery ireo lahatsary ety anaty aterineto ianao.
Raha mangataka amin'ny AutoCAD ianao, dia tsy maimaim-poana izany. Tompon'ny AutoDesk ary ilaina ny mividy azy io, ny famolavolana LT an'ny AutoCAD 2012 dia manodidina ny iray tapitrisa dolara amerikana.
PAOLA SALAZAR hoy izy:
TSY MAHALALA NY FOMBA FAMPIANARANA IANAREO IANAREO IANAREO SY TSY MAHATSIARO NY FAMPIANARANA AZY IZAHAY TSY MANAIKY AZO IZANY AUTOCAD 2011 TSY AZO AMIN'IZAO TONTOLO IZAO !!!
Tsy azo atao ny mandefa ny fianarana, tokony hijery ireo horonan-tsary mifandray amin'ny Internet.
Alf hoy izy:
Hi, vaovao aho amin'ny fampiasana AutoCAD, ary te hidera anao aho noho ny anjara biriky amin'ity dingana ity ary tiako ho fantatra raha afaka maka azy io aho ary amin'ny fomba ahoana, tena mankasitraka azy aho.
Roberts Basaldúa hoy izy:
Ny zava-baovao ao amin'ny AutoCAD 2012 izay manome bara sy baiko vaovao ny kinova AUTODESK rindrambaiko vaovao, izay ampiharina amin'ny Siansa sivily miaraka amin'ny fananganana sivily sy lalana.
Misy orinasa sasantsasany ao amin'ny aterineto izay manomana diplaoma amin'izany fomba izany ho an'ny mikrosta, fa ny karaman'izy ireo kosa.
Mamela rohy aho:
Lazao izy ireo hanome anao code code "fihenam-bidy" geofumadas
Tiako ho fantatra ve raha misy ny fandaharam-potoana ho an'ny Microstation v8i?
autocad course hoy izy:
Fanampiana tsara. Heveriko fa tena mahasoa ny mianatra manova ity programa ity, izay tena ilaina amin'ny asa maro. Ny fahaiza-mampiasa ny fitaovana maro, ny fampiasany mora ampiasaina ary ny fahitana ny atiny dia mahatonga ity programa ity ho iray amin'ny ankamantatra amin'ny architects, draughtsmen, graphic designers, decorators, sns.